ပန်ဒိုရာ: sTuPiD Q-U-E-S-T-I-O-N-S
Posted by pandora at 11:32 PM
Brilliant work!!!! Congratulations!!!
ဘယ်သူတွေလာ ဖြေမလဲ မသိဘူး
ဘာလဲဆိုတာ သိအောင်..နက်ဖန်မှ.. ထပ်လာကြည့်တော့မယ်..
အလုပ် ရှုပ်ခံလို့ကွယ်... ကိုယ့်ဘာသာ စားစရာရှိတာ စားလိုက်ပေါ့... ခေတ်ကာလက မကောင်းရတဲ့ ကြားထဲ... ခေါင်းကိုက်အောင်... လျှောက်မလုပ်နဲ့...း)
ထီထိုးပြီး ထီအရင် တိုက်ပါ..
ပေါက်ရင် ၀ိုင်ခွက်ချင်းထပ် တိုက်မယ်.. "Cheers" !!
မေးခွန်း ၄ က ကဗျာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကတော့ ကဗျာကိုယ်တိုင် ကပဲပြန်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ဒီလောက်ခေါင်းစားတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုထုတ်နိုင်တာကိုက ဆြာကြီးပါပဲ။ ဦးနှောက်က သေးလို့လိုက်မမှီပါကြောင်း။
၃ ............ ကိရိယာတဲ့ Aristotle လား Bakhtin လား မမှတ်မိတော့ဘူး အဲလောက်တော်တာ
၁ နဲ့ ၄ က... ယူဆချင်သလို ယူဆသူပေါ်မှာ မူတည်၏..
သိဘူး... လျှောက်ပြောသွားတာ အမှားတွေချည်းပဲ...
ရဲရဲကြီးဖြေနိုင်တာတော့ နံပါတ်(၄) မေးခွန်းပဲ..
ပန်ဒိုရာ(ဆြာဂျီး) ကဗျာ ထင်လို့ ကဗျာရေးဖြစ်သည်။ သက်သက် ဦးနှောက်စားခြင်းမျှသာ .....
ဒီနှစ် မေးခွန်းသတ်တယ်ဗျ... ဖြေတတ်ဘူး...
မေးခွန်းထဲမှာပါတဲ့ အဖြေတော့သိတယ်... ဒါက ကဗျာဗျ... မဟုတ်ရင် ဆရာမက Labels: poem လို့ရေးမှာမဟုတ်... :P
ဒီနေ့ ကွဲတယ်ဟ ဆိုတဲ့စကား ကျောင်းတုန်းက စာမေးပွဲခန်းထဲမှာပဲ ရှိသလားမှတ်တယ်...
ပန်ပန့် ဘလော့ဂ်မှာလဲ ရှိသကိုး...။
တကယ်ခက်လို့အဖြေမထွက်ပါ ပန်ပန်ရေ...
ဆရာမကိုယ်တိုင် ဖြေပြမှ ရမယ်လေ...။
ဆြာဂျီး.... ကဗျာကို အရမ်းသဘောကျတယ်....
အဖြေ နံပါတ်- တစ်။ ကဗျာရဲ့ အထက်မှာ ကဗျာရေးသူရဲ့ ကဗျာရေးချင်စိတ် ရှိပါသည်။ ရေသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းသလို ကဗျာ ရေးချချင်စိတ်ကနေ ကဗျာတွေကို ဖန်တီးပါသည်။
အဖြေ နံပါတ်-နှစ်။ အဖြေ အားလုံး မှန်ကန်သည်။
(က) ကဗျာရေးသူ တစ်ဦး ကဗျာရေးခြင်းသည် မှန်ကန်သည်။ အကြောင်းပြချက် လိုမည် မထင်ပါ။
(ခ) ကဗျာရေးသူသည် သီအိုရီကို ရေးသည်ဆိုသည်မှာလည်း မှန်ကန်သည်။ ကဗျာရေးသူသည် သူ့အတွက် အမြဲမှန်ကန်သည့် တရားဟု ထင်မြင်ယူဆသည့် အကြောင်းခြင်းရာ (ခ) သီအိုရီ ကို ရေးလေ့ရှိသည့်အတွက် ကဗျာရေးသူသည် သီအိုရီကို ရေးသည်။
(ဂ) ကဗျာရေးသူသည် ဘာသာစကားကို ရေးသည်ဟူသည့် အဆိုလည်း မှန်ကန်သည်။ ကဗျာရေးသူသည် မိမိ၏ စိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ပြရန် ရှိပြီးသား ဘာသာဗေဒက ဖော်ပြနိုင်စွမ်း မရှိသည့်အခါ စကား အသုံးအနှုန်း အသစ်များ (တနည်းဆိုရလျှင်) ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူလေ့ ရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။
(ဃ) ကဗျာရေးသူသည် ဘာကိုမှ မရေးပါ ဆိုသည်မှာလည်း မှန်ကန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကဗျာရေးသူသည် ကဗျာရေးလေ့ရှိသူ ဖြစ်၍ ကဗျာရေးသူဟု ခေါ်ခြင်းခံရသော်လည်း သူ့တွင် ဘာကိုမှ မရေးချင်လျှင်လည်း နေနိုင်သည့် လူ့အခွင့်အရေး ရှိသည်။
အဖြေ နံပါတ် -သုံး။
"ဘာသာစကားသည် ကိရိယာ "
ရှေးဦးလူတို့သည် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အတွက် ဘာသာစကားကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာစကားသည် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၏ စိတ်ခံစားမှုကို စကားအဖြစ် အနီးစပ်ဆုံး အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်သည့် Protocol တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်းကို အသုံးချ၍ လူသား တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဘာသာစကားမပေါ်မီကထက် နားလည်မှု ပိုမိုလာနိုင်သောကြောင့် ဘာသာစကားသည် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း ရှေးဦးလူတို့ တီထွင်ခဲ့သည်များအနက် အသုံးဝင်ဆုံးသော ကိရိယာ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည်မှာ ယုံမှား သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိချေ။
(သို့ .. စာစစ်သူ .. ဆက်ရေးချင်စိတ် ရှိပေမယ့် စာရေးဖို့ အကြွေးတွေ ရှိသေးလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်)
အဖြေ နံပါတ်-လေး။ အထက်ပါအကြောင်းအရာတို့သည် ကဗျာဖြစ်သည်ဟု ယူဆသူတို့အတွက် ကဗျာ ဖြစ်နေမည် ဖြစ်ပြီး ကဗျာ မဖြစ်ဟု ယူဆသူတို့အတွက် ကဗျာ မဖြစ်ပါ။ ကဗျာ အဖြစ် လက်ခံခြင်း မခံခြင်းကို ကဗျာရေးသူက ဂရုစိုက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ကဗျာရေးသူသည် ကဗျာရေးချင်စိတ်ဖြင့် ရေးလိုက်ပြီးသည့်အခါတွင် သူ့တာဝန် ပြီးဆုံးသွား၍ ကဗျာဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းကို ဖတ်သူများက ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်။
(သို့ .. စာစစ်သူ..stupid questons ဆိုလို့ stupid answers တွေချည်း ဖြေလိုက်တယ်။ စာစစ်သူနဲ့ အယူအဆခြင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြတာပေါ့။ :D )
ကဗျာ လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျ ၊၊
ဥာဏ်မမီ လို့ လားမသိ..
တစ်ခုမှ စဉ်းစားလို့မရဘူး :)
ဒေါ်လေး အဲ့တာတွေ သင်တဲ့နေ့က အနော် ကျောင်းပြေထားတယ် မဖြေလို့ရဘူးလား ဆြာလုပ်တာဟုတ်ဘူး ဂယ်မသိလို့ပါဗျာ =)
ကဗျာရေးသူက ရေးချင်တာကို ရေးမှာပေါ့။
အဖြေ - တစ်
အနုပညာ/ကဗျာ ရဲ့အထက်မှာ အနုပညာ/ကဗျာ ဖန်တီးမှု ရှိပါမည်။ Art has/ is Creativity and Creativity creates Art လို့ ယူဆပါသည်။
အဖြေ - နှစ်
ယူဆသူအပေါ်လိုက်ပြီး အားလုံးမှန်နိုင်သလို အားလုံးလည်း မှားနိုင်ပါသည်။
အဖြေ - သုံး
ဘာသာစကားဆိုသည်မှာ လူအများစု တညီတညွတ်တည်းသတ်မှတ်ထားသော သင်္ကေတ (Symbol) သို့မဟုတ် ကိရိယာ (Tool) သို့မဟုတ် ကြားခံ (Media) တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားဖြင့် လူတို့၏ စိတ်ခံစားမှုကို အနီးစပ်ဆုံး ဖော်ပြနိုင်သော အရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဘာသာစကားကြောင့် လူသားတို့၏ နားလည်မှုပိုလာနိုင်သလို နားလည်မှုလွဲခြင်းလည်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။ စိတ်ခံစားမှုတိုင်းကိုလည်း ဘာသာစကားဖြင့် အတိအကျ ဖော်ပြရန်လည်း တခါတရံ ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ။ `Hey...´ ဆိုသော စကားလုံးသည် လေသက်သည့် အသံလား တစ်ယောက်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သံလား၊ သံပြင်းချသံလား၊ ပျော်ရွှင်၍အော်လိုက်သည့်အသံလားဆိုသည်ကို အခြားသော နီးစပ်ရာ စာကြောင်း၊ အခြေအနေ (Context) ကို သိမှ အပြည့်အ၀ နားလည်နိုင်ပေမည်)
ဘာသာစကားကြွယ်ဝမှုအပေါ် ဆုံးဖြတ်ပြီး လူတစ်ယောက်၏ ဗဟုသုတနှင့် စာပေလေ့လာမှုကို အကြမ်းအားဖြင့်လည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပညာမတတ်သူကို အရိုင်းအစိုင်း၊ ဉာဏ်နိမ့်သူ စသဖြင့် သတ်မှတ်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ဘာသာစကားဖြင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၌ ဘ၀အတွေ့အကြုံရှိမရှိ လူကြီးလူကောင်းပီသမသ၊ အကျင့်စာရိတ္တ ဖြောင့်မဖြောင့် စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ချိန်ထိုးဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားတစ်ခု ဆင်းသက်၊ သက်ဆင်းလာပုံကိုကြည့်ပြီး လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး မည်သို့ဆက်နွယ်ခဲ့သည်၊ မည်သို့မြစ်ဖျားခံ ဆင်းသက်လာသည်ကို ဘာသာဗေဒပညာရှင်တို့က ပြောဆိုနိုင်ကြသည်။ ကွဲပြားနေသော ဘာသာစကားတို့သည် လူတို့၏ ကွဲပြားသော ဓလေ့၊ ရိုးရာ စသည်တို့ကိုလည်း အနည်းနှင့်အများ ထင်ဟပ်နိုင်သည်။ သို့သော် အခြားနိုင်ငံမှ အက္ခရာ ရေးထုံးစသည်တို့ကို မွေးစားအသုံးပြုနေသော လူမျိုး၊ နိုင်ငံ တို့အား ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုမရှိဟု ကောက်ချက်ချဖို့ရန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။
အဖြေ - လေး
ကဗျာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည် လေထုကို ဓာတ်ခွဲခြင်းနှင့် တူသည်ဟု ယူဆမိသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပ၌ဖြစ်စေ လေထုသည် လေထုသာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခွဲမခွဲခွဲ လေထုသည် လေထုသာဖြစ်သည်။ အလားတူ ကဗျာသည်လည်း ကဗျာသာဖြစ်သည်။
(ကမ္ဘာကြီး၏ ထောင့်တစ်နေရာရှိ ထိုင်ခုံတစ်လုံးပေါ်တွင်ထိုင်ပြီး ထင်ရာမြင်ရာ ဖြေဆိုထားခြင်းသာဖြစ်သည်)
ကဗျာလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ် အစ်မရေ..
ထင်တာကတော့ ကဗျာရေးသူက ကဗျာရေးတယ်ထင်တာပဲနော
ပြီးတော့ ဘာသာစကားဆိုတာကလည်း ကိရိယာ တစ်ခုပဲထင်တာပဲ
ဟိ... ကဗျာရဲ့ အထက်မှာတော့ ကဗျာခေါင်းစဉ်ရှိမှာသေချာတယ်း)
အချိန်ပေးပြီး မှတ်ချက်ရေးသွားသူတွေ ဖြေကြည့်သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ညီညီ ဟန်သစ်ငြိမ်တို့ရဲ့ အဖြေတွေကလည်း လန်ထွက်နေပါတယ်။ :D
9 Jan 09, 11:50
ခေးရော့စ်: ကွန်မန့်ပေးမရလို့ ဆီပုံးမှာ ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်သွားကြောင်း
ခေးရော့စ်: ရင်ဘတ်ထဲကရေးနေမိသလိုပါပဲ။ ဘာသာစကားကို စာစီကုံးဖို့ကြိုးစားတာ အထာမကျတဲ့ ကဗျာပဲထွက်လာတယ်။ မပန်ရဲ့ လို အထာလှလှကဗျာလေးဖစ်မလာဘူးပဲ။
9 Jan 09, 11:49
ခေးရော့စ်: နံပါတ်(၁)က သူ့အထက်မှာ ကဗျာကိုချစ်တဲ့ ကဗျာရေးတဲ့စိတ်..... (၂)က ကဗျာရေးသူက တစ်ခါတစ်လေ ဘာရေးလိုက်မှန်းမသိဘူး။ ဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲ သီအိုရီပါသွားတတ်သေးတယ်တစ်ခါတစ်ခါ... ကဗျာက ဘာသာစကားက မြစ်ဖျားခံတာ မဟုတ်တော့
ခေးရော့စ်ရဲ့ မှတ်ချက်ကိုလည်း အမှတ်တရ ဒီမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စလုံးစခုတွေက များပါတယ်။